တိတ်​တိတ်​ပုန်း – Grab Love Story
ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုမည်ဆိုလျှင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲကိုကျင်းပ ​လေ့ရှိကြတယ်။ နယ်ခြားနေတဲ့စုံတွဲတွေဆိုတစ်ဖက်မှာတစ်ပွဲစီကျင်းပကျတယ်။အများအားဖြင့်မိန်းကလေးဘက်မှာကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ​အချို့​သောသူတွေအဖို့တစ်ပွဲသာကျင်းပသဖြင့်ကျန်တစ်ဖက်ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအခက်တွေ့ကြရတယ်။ ယခုဇာတ်လမ်းကထိုပြသနာကိုအစပြုပြီးအိအိငြိမ်း​ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအတွက်လမ်းနှစ်သွယ်ကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်။ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရင်ကျန်တစ်ခုကိုရင်နာစွာစွန့်ပစ်ရမှာပါ…။ အလယ်တန်းပြဆရာမလေးအိအိငြိမ်းချစ်​​သောကိုနှင့်အိမ်ထောင်ရက်​သားကျပြီဖြစ်၍ကိုအလုပ်သွားချိန်​စ​နေ​နေ့တွင်​အိအိငြိမ်း တစ်ယောက်တည်းအိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည်။ အိအိငြိမ်းမှာကိုနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသည်မှစ၍ကိုနှင့်တစ်​ခါသာချစ်ဖူးသေးသည်။
အိအိငြိမ်းမှာဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိမိန်းကလေးဖြစ်သဖြင့်ကိုကအိအိငြိမ်းငြင်းဆန်သဖြင့်အင်္ကျီမချွတ်ဖူးသေး။ ဟို​နေ့ကထဘီလေးကိုအသာလှန်ကာ၃မိနစ်ခန့်လုပ်ပြီးလျှင်ကိုကပြီးသွားသည်။ အိအိငြိမ်းမှာအသက်၂၅နှစ်ခန့်ရှိပြီးအသားလေးကဖြူဝင်းစိုပြည်သည်။ အထူးသဖြင့်နက်မှောင်နေသောဆံကေသာလေးများမှာအိအိငြိမ်းကိုမဟာဆန်၍ကျက်သရေရှိစေသည်။ အရပ်က၅ပေ၆လက်မခန့်ရှိပြီးအရပ်နှင့်လိုက်အောင်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့နေရာနှင့်သူအချိုးကျနေသည်။ သေးသွယ်သောခါးလေးအောက်မှစွင့်ကားလုံးဝန်းသောတင်သားများနှင့်မို့တင်း၍ကြွရွနေသောရင်သားနှစ်မွှာတို့မှာမြင်သူပုရိသတို့ကိုလည်ပြန်ငေးစေသည်။ ​ကျောင်းချိန်​တွင်​ဆိုလျှင်​အိအိငြိမ်းသည်ပါးတွင်သနပ်ခါးလေးများပါးပါးလိမ်း၍သူမဧ။်​နက်မောင်လှသောဆံပင်များကိုထုံးထားသည်မှာ ခန့်ညား​ချော​မောလွန်းလှသည်။ ​နေ့ခင်းအချိန်များသည်ဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်း၏ကိုယ်လုံးအလှဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ဆရာမ​လေး၏ကျောင်းစိမ်းအင်္ကျီမှာအလွန်ပါးလွှာ သည်မဟုတ်​​သော်​လည်း​တော်​​တော်​​လေးကိုပါးသည်​။ထိုအခါကျောင်းအင်္ကျီအဖြူရောင်အောက်မှာထင်ရှားလှသော အသားရောင်မြန်မာဘော်လီနှင့်ဝင်းဝါလှပ​သောနို့အုံကြီးများကိုအထင်အရှားမြင်​နေရတတ်​သည်။ ဆရာမ၏​ဘော်​လီ​ပေါ်မှ၃ပုံ၁ပုံခန့်​လျှံထွက်​​နေ​သောနို့အုံကြီးသည်လည်းမြင်သမျှယောကျာ်းတိုင်းအားစိန်ခေါ်နေသလိုဖြစ်​နေသည်။ ဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်းများလမ်းလျှောက်လိုက်ရင်​အဖြူရောင်ခါးတိုရင်ဖုံးလေးနှင့်ကျောင်းစိမ်းထမီအထက်ဆင်လေးကြားမှပေါ်ထွက် လာတဲ့ဖြူဖွေးချောမွတ်နေတဲ့ခါးစပ်နေရာလေးက၀င်းခနဲဝင်းခနဲ…ခပ်တင်းတင်းဆွဲစည်းထားသောအထက်ဆင်လေးအောက်မှတင်းရင်းကားထွက်နေသောတင်သားစိုင်တို့မှာနိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြင့် ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှသိသာထင်ရှားစွာကားထွက်နေတယ်….တင်သားတို့ရဲ့အောက်ပိုင်းနေရာလေးမှာလည်းသိသာထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်နေတဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီကြိုးလေးမှာအစင်းလိုက် အထင်းသား….စစ်ကိုင်းအိုးးးလားဂစ်တာရှိတ်လား…မင်းကြီးကြိုက်လား..အို…..ဘာနဲ့တင်စားခိုင်းနှိုင်းရမလဲမသိတော့။
လမ်းလျှောက်ဟန်စကားပြောဟန်တို့မှာလည်းသိမ်သိမ်မွေ့မွေ့တိုးတိုးညင်းညင်းလေးဖြစ်သည်။ရုပ်ရည်လေးမှာလှသည်ဆိုသည်ထက်ချောသည်ဆိုလျှင်ပိုမှန်မည်။ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်လေရင်ထဲထိစေသည့်အလှပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစသုံးရက်သာရှိသေးတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ဇနီးသည်လေးအိအိငြိမ်း​အိမ်တံခါးခေါက်သံကြောင့်အပြေးကလေးထွက်လာမိသည်။လင်သားကိုမင်းသစ်​အလုပ်ပြန်လာရင်ကြိုဖို့အလှဆုံးပြင်ပြီးအပြေးကလေးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။တံခါးလေးဖွင့်ပေးသောအခါကိုမင်းသစ်​အပြင်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါလာလေသည်။ ”အော်…ဧည့်သည်တွေပါလား…အိမ်ထဲကြွပါရှင့်” အသီးသီးအခန်းထဲဝင်လိုက်ကြလေသည်။ ”မိန်းမရေ….ဒီနေ့ရုံးကကောင်တွေကိုလည်းပြုစုရသေးတယ်…ကိုအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်…” အသံကနည်းနည်းမူးစပ်စပ်ဖြစ်နေသည်။ ”ရပါတယ်အကိုရယ်…အိတို့မင်္ဂလာဆောင်ကအဝေးမှာဆောင်တာဆိုတော့သူတို့ကိုပြန်ဧည့်ခံရမှာပေါ့” ”မှန်တာပေါ့မိန်းမရာ…ဒီကနှစ်ယောက်ကဒီကွန်ဒိုကအိမ်နီးနားချင်းတွေပါ..” အိအိငြိမ်း​အပြုံးလေးဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။မင်းသစ်​လျှာလေးအာလေးဖြင့် ”ဒီဘက်ကသန်းကြိုင်​​တဲ့သူကရှေ့အခန်းက၊ဒီဘက်က​အောင်​​မောင်း​တဲ့သူကအောက်ထပ်ကသူတို့ကိုပြုစုဖို့ခေါ်လာတာ၊ဒီမှာအရက်နဲ့ဘီယာပါလာတယ်…မိန်းမအမြည်းတစ်ခုခုစီစဉ်ပေး” ”​ကောင်းပါပြီ​ရှင့်…ရပါစေမယ်” အိအိငြိမ်း​နောက်ဘေးခန်းကိုတည်ငြိမ်စွာထွက်သွားလေသည်။သူမရဲ့နိမ့်ချည်မြင့်ချည်တင်သားတွေနဲ့နောက်ကျောအလှကိုသန်းကြိုင်​​မျက်စိတစ်ဆုံးအရသာခံကြည့်ရှုလိုက်လေသည်။
သူမ၏ဖင်တုံးကြီးတွေတုန်ခါသွားတာကြည့်ရင်းသန်းကြိုင်​တံထွေးသာမျိုချနေမိသည်။ဒီဆော်​လေးကိုဖင်ကုန်းခိုင်းပြီးနောက်ကနေခွလိုးလိုက်ရရင်တော့သေပျော်ပါပြီလို့​တွေးမိသည်။ သန်းကြိုင်​ဒီနေ့တော်တော်တင်းနေသည်။ အလုပ်နောက်ကျလို့သူဌေးကကောသည်။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်စောက်ကုလားတွေဘာဖြစ်တယ်၊ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဆဲခံလိုက်ရ ​သေးသည်။အသားမဲတာနဲ့ပဲလူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံနေကြတာကိုး။ ဒီတိုက်​ခန်းကမိန်းမက​တော်​​တော်​​ချောတယ်​။​ဆရာမ​လေးတဲ့။ရောက်​လာတာ၂ရက်​ပဲရှိ​သေးသည်​။ အခု​တော့သူ့​ယောက်ျားဖြစ်​သူကမိတ်​ဆက်​​ပေး​တော့​သေချာကြည့်​မိသည်​။ေ​တာ်​​တော်​​ချောပြီး​တော်​​တော်​လဲ​တောင့်​​ကြောင်းအနီးကပ်​ကြည့်​မှပိုသိလိုက်​ရသည်​။ ”ကဲကိုယ့်လူတို့…ကျွန်​တော်လည်းသွားကူလိုက်အုန်းမယ်ခဏ…ခဏ” မင်းသစ်​လည်းအိအိငြိမ်း​နောက်လိုက်သွားလေသည်။မကြာမီအိအိငြိမ်း​ရောက်လာကာစားပွဲခုံပေါ်ဖန်ခွက်လေးတွေလာချပေးသည်။ စားပွဲကိုခါးလေးကုန်းကာချဖန်ခွက်ချလိုက်သည်မို့ဟိုက်သွားသောအင်္ကျီကြောင့်အိအိငြိမ်း​ရဲ့ရင်သားဖွေးဖွေးနုနု​တွေကိုသန်းကြိုင်​​နဲ့ အောင်​​မောင်း​ထပ်မြင်လိုက်ရတော့လီးတွေတောင်ကုန်ကျသည်။အိအိငြိမ်းရင်​သား​ဖွေး​ဖွေး​တွေကို​ဘော်​လီရင်​ပုံခွက်​အထိ​သေချာ မြင်​လိုက်​ရတာ​ကြောင့်​သန်းကြိုင်​မျက်​စိထဲကမထွက်​နိုင်​​တော့။ သန်းကြိုင်​က​တော့အိအိငြိမ်းကိုစိတ်​ထဲက​နေအ​သေမုဒိမ်းကျင့်​​နေပြီ။
အိအိငြိမ်း​အမြည်းစီစဉ်ရန်ထပ်ဝင်သွားပြန်ပြီ​။ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​​ကကာမလိုက်စားတဲ့လူတစ်ယောက်။သူ့မှာအိပ်ဆေးတွေကွန်ဒုံးတွေအမြဲဆောင်ထားတတ်တယ်။သန်းကြိုင်​​ဖန်ခွက်တွေထဲအရက်တွေထည့်ပေးထားလိုက်သည်။အိအိငြိမ်း​ရဲ့ခွက်ထဲအချိုရည်ထည့်ကာ အိပ်ဆေးမှုန့်​လေးခတ်ပေးလိုက်သည်။မင်းသစ်​ခွက်ထဲလည်းနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ပြီးဟန်မပျက်ပြန်နေလေသည်။ ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​​ကတစ်ကိုယ်ထီးသမားလူရှုပ်လူပွေ။​အောင်​​မောင်း​ကတော့မိန်းမနဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့မို့သိပ်​အတင့်မရဲဘဲ အကဲသာခတ်နေသည်။ မကြာမှီအမြည်းပွဲလေးတွေကိုင်ကာမင်းသစ်​နှင့်အိအိငြိမ်း​ထွက်လာလေသည်။ ”အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ​ရှင့်…စားကြနော်အားမနာနဲ့” ”ရပါတယ်…ကျွန်​တော်ကျွဲရိုင်းထည့်ပေးထားတယ်သောက်တယ်မလား” ”အားနာစရာရှင်…အကိုတို့ပဲ​သောက်ကြပါ” သောက်ကြစားကြစကားပြောကြရင်းအိအိငြိမ်း​မျက်လုံးများလေးကာခုံပေါ်မှာတင်အိပ်ပျော်သွားလေသည်။မင်းသစ်​နဲ့​အောင်​​မောင်း​ စကားတွေဖေါင်ဖွဲ့ရင်းမင်းသစ်​လည်းများပြီးမှောက်သွားလေသည်။သန်းကြိုင်​​ကဟန်ပြသောက်ထားသူမို့ ”​အောင်​​မောင်း….​မင်း…ဒီ​ကောင့်​ကိုခဏအဖော်လုပ်ပြီးထိန်းထားကွာ…ငါအိအိငြိမ်း​​လေးနဲ့ခဏလောက်ကစားချင်လို့..ဟဲဟဲ” ”ဟာ…ဟေ့ကောင်ပြသနာတက်မယ်နော်” ”မင်းကလည်းအေးဆေးပါ….နောက်နေ့မင်းအတွက်ပါဖန်ပေးမယ်” အိအိငြိမ်း​ကိုသန်းကြိုင်​​အသာဆွဲထူကာအိပ်ခန်းဝကိုပွေ့ခေါ်သွားလေသည်။အိအိငြိမ်း​ကတော့တုတ်တုတ်မလှုပ်။
သူအလွန်​တပ်​မက်​​နေ​သော​တွေ့​တာ​တောင်​မကြာ​သေးသည့်​မိန်းမ​ချော​လေးမို့​ပွေ့ရတာ​တောင်​အရသာရှိလွန်းလှသည်​။ သန်းကြိုင်​​နုထွေးအိစက်နေသောအိအိငြိမ်း​ကိုအခန်းဒေါင့်လေးမှာထိုင်ရပ်သားလေးအနေအထားမှေးထားလိုက်သည်။ အဆီတစ်ဝင်းဝင်းနဲ့အိအိငြိမ်း​ကိုသန်းကြိုင်​​ကာမခံစားပြီးဖျက်​ဆီးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်လီးအပြတ်တောင်နေလေသည်။ ​သောက်လဲသောက်ထားတာမို့စိတ်ကလဲစိတ်ရိုင်းဝင်မိသည်။အခန်းထဲရောက်တော့တံခါးပိတ်ပြီးအိအိငြိမ်းကိုကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်တင်လိုက်သည်။သူမကတော့မူးနေပြီမို့မသိတော့။ သန်းကြိုင်​က​ဘေးနားမှာထိုင်ရင်းအင်္ကျီခါးတိုအကြပ်အောက်ကနေအသက်ရှူတိုင်းမို့မို့တက်လာတဲ့ရင်သားတွေကိုကြည့်ရင်းစိတ်က ထလာသည်။အိအိငြိမ်းကိုခုနကမှန်းခဲ့တာတွေကိုတွေးမိပြီးအိအိငြိမ်းရဲ့နို့တွေကိုလက်ကလှမ်းလိုက်ပြီးကိုင်လိုက်သည်။ အိအိငြိမ်း​အင်္ကျီလးကိုအသာမ၍ချွတ်လိုက်လေသည်။အထဲကဘော်လီအသား​ရောင်​​လေးကိုပါချိတ်​​တွေတစ်​ခုချင်း​သေ​သေချာချာ ဖြုတ်​ပစ်​ပြီးချွတ်​လိုက်လေသည်။စို့ချင်စရာနို့သီးခေါင်းလေးတွေကြောင့်သန်းကြိုင်​​တံထွေးတောင်မြိုချမိသည်။ ခဏစိတ်ထိန်းကာထမိန်လေးကိုအသာလေးဆက်ချွတ်လိုက်​သည်​။ အိအိငြိမ်းရဲ့ထဘီစကပ်​ကိုဖိနပ်ကိုမချွတ်တော့ပဲချွတ်လိုက်သည်။ပင်တီအသား​ရောင်​​လေးပဲကျန်တော့သည်။ ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်လှသည်။ပင်တီပေါ်ကနေလက်နဲ့ထက်အောက်ပွတ်ဆွဲချလိုက်သည်။ အတွင်းခံလေးအောက်ကစောက်ဖုတ်မို့မို့​လေးကိုကုန်းနမ်းကာအနံ့လေးခံလိုက်သည်။
”အား…အမွှေးနံနဲ့အဖုတ်နံလေးရောပြီးသင်းနေတာပဲ” နို့တွေကိုလက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနို့သီးခေါင်းနီနီလေးကိုငုံ့ကာစို့လိုက်တော့အင်းခနဲအသံနဲ့အတူအိအိငြိမ်းရင်ဘတ်က ကော့တက်​လာသည်။အိအိငြိမ်းမျက်လုံးက​တော့မဖွင့်ပေ။ သန်းကြိုင်​အိအိငြိမ်းနို့တွေကိုစို့ရင်းလက်ကပေါင်တွေကိုပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။ ပင်တီကိုချွတ်လိုက်တော့အမွှေးတွေကဆေးနဲ့ချွတ်ထားသည်ထင်သည်။ပါးပါးစုစုလေး။ သန်းကြိုင်​အိအိငြိမ်းရဲ့​ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကားလိုက်ပြီးလက်ခလယ်နဲ့အဖုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့အဖုတ်ကအရည်တွေနဲ့။ အတွင်းထဲကိုဝင်သွားတော့သန်းကြိုင်​လဲကလိပေးလိုက်သည်။ဂျီစပေါ့နေရာကိုမှန်းကာခပ်ဆက်ဆက်ကလိလိုက်တော့အိအိငြိမ်းဖင်က ကြွကြွတက်လာပြီးပါးစပ်ကမတိုးမကျယ်အသံနဲ့ညည်းနေသည်။ အိပ်မောကျနေသောအိအိငြိမ်း​ခမျာမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြစ်နေသည်။ မ​နေ့တစ်​​နေ့ကမှသတို့သမီး​လေးဖြစ်​ခဲ့တဲ့ယဉ်​ယဉ်​​ကျေး​ကျေးနွဲ့နွဲ့​နှောင်း​နှောင်းမိန်းမ​ချော​လေးတစ်​​ယောက်​ကိုအ၀တ်​​တွေချွတ်​​နေရတာ​ကြောင့်​သန်းကြိုင်​လီးကတအား​တောင်​​နေသည်​။ အိအိငြိမ်း​ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုထောင်ဖြဲပြီးကားစေလိုက်သောအခါအိအိငြိမ်း​နံရံကိုမှီကာအဖုတ်ဖြဲပြနေသောအနေအထားဖြစ်နေသည်။
သန်းကြိုင်​​ဘောင်းဘီထဲကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးအိအိငြိမ်း​ရဲ့ချစ်စရာမျက်နှာကစပြီးရင်သားတစ်ပြင်လုံးနဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်း လှလှ​လေးပါပေါ်အောင်ဓာတ်ပုံများစွာရိုက်လိုက်လေသည်။ကျေနပ်အောင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသောအခါသန်းကြိုင်​​ဘောင်းဘီဆွဲချွတ် လိုက်​လေသည်။ဘောင်းဘီထဲကတုတ်ခိုင်သန်မာလှသောဂေါ်လီတပ်လီးကြီးကမတ်ခနဲထွက်လာသည်။အိအိငြိမ်း​ရဲ့မျက်နာနုနုလေးကိုလီးနဲ့လေးငါးချက်ထိုးကာအလန်းဆုံးအနေအထားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြန်သည်။နောက်ဖုန်းကိုဘေးခဏချကာနို့အုံဖွေးဖွေးတွေကိုဆုပ်ကိုင်ကာအားရအောင်စို့ပစ်လိုက်သည်။ ”ဟူး….စောက်ပတ်​လေးကစီးပိုင်မယ့်​ပုံဘဲ” လီးထိပ်ကိုတံထွေးစွတ်ကာဘေးစောင်းလှဲပြီးအိအိငြိမ်း​စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ကာစောက်ခေါင်းထဲထိုးထည့်လိုက်လေသည်။ လီးဒစ်​​ကျော်​ရုံ​လောက်ထိုးထည့်လိုက်လေသည်။လက်တစ်ဖက်ကဖုန်းကိုယူကာအိအိငြိမ်း​မျက်နှာနှင့်အဖုတ်ထဲလီးဝင်နေပုံကို မှတ်တမ်းယူလိုက်ပြန်သည်။သန်းကြိုင်​​လီးပြန်ထုတ်ကာအိအိငြိမ်း​ကိုခုတင်​​ပေါ်ကိုယ်​တစ်​ပိုင်းကုန်းကုန်း​လေးတင်​ထားပြီး​ နောက်​က​နေ​​စောက်ပတ်​လေးထဲလီးထိုးချလိုက်သည်။ သန်းကြိုင်​လဲအိအိငြိမ်းခါး​လေးကိုအသာမလိုက်တော့အိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကကြွလာသည်။ အိအိငြိမ်းအဖုတ်ထဲကိုသန်းကြိုင်​လီးထည့်လိုက်ရာ ”ဗျစ်….ဗျစ်” ”အ…ဟ….ဟ….အာ့…ဟင်​….ကိုသန်းကြိုင်​…” အဖုတ်ထဲသို့လီးကကြပ်ပြီးဝင်သွားရာအိအိငြိမ်းညည်းသံနဲ့အတူမျက်လုံးပွင့်သွားပြီး​နောက်​ပြန်​​လေးလှည့်​ကြည့်လိုက်ရာသန်းကြိုင်​ကို ​တွေ့လိုက်ရတော့အလန့်တကြားဖြစ်သွားသည်။
အစကသူမမူးမူးနဲ့ကိုကိုကလုပ်ပေးနေတာလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေပြီးအဖုတ်ထဲကိုလီးကြီးပြီးဝင်လာတော့နာသွားလို့ယောင်ယမ်းမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမှသန်းကြိုင်​ကိုတွေ့တော့အတင်းရုန်းတော့သန်းကြိုင်​က သူမကိုဖိထားပြီးလီးကိုအဆုံးထိထည့်လိုက်သည်။အိအိငြိမ်းခမျာအဖုတ်ထဲမှာပြည့်သိပ်စွာလီးကဝင်သွားပြီးနာသွားရသည်။ ”ဖယ်…ကိုသန်းကြိုင်​…မယုတ်မာနဲ့နော်…..ရှင့်​သူငယ်​ချင်းရဲ့မိန်းမကိုဒီလိုလုပ်စရာလား….ဖယ်နော်…ကျွန်မအော်လိုက်မှာ..” ”မထူးပါဘူးအိရယ်…ကိုယ့်လီးတချောင်းလုံးမင်းအဖုတ်ထဲကိုဝင်နေပြီဟာကို….အော်တော့လဲဘာထူးမှာလဲ…. ဘယ်သူကကြားမှာမို့လဲ…ငြိမ်ငြိမ်သာလိုးတာခံလိုက်စမ်းပါ” ”ရှင်…ဟင့်​…လူယုတ်မာ…အောက်တန်းစား…ကုလားပီပီခွေးကျင်းခွေးကြံကြံတယ်…​ခွေးကြီး…ဟင့်…ဟင့်” ”ငိုငို…ကြိုက်သလောက်သာငိုစမ်း…ဟဲ…ဟဲ..ကောင်းလိုက်တာကွာ….မင်းအဖုတ်ကလင်​ရှိမယားဆိုပေမယ့်ကြပ်နေတာပဲ…. ရှိးးးအားးးး….လိုးလို့ကောင်းတာ…ဟားဟား” သန်းကြိုင်​ကြမ်းပြီ။အစကဒီလောက်ထိကြမ်းဖို့မရှိပေ။ အိအိငြိမ်းကသူ့အရှိုက်ထိစေမယ့်စကားကိုနစ်နစ်နာနာပြောတာကြောင့်ခုနကတည်းကစိတ်​ထဲမှာခပ်​ကြမ်းကြမ်းမှန်းဖူးတဲ့ အခံလည်းရှိ​တော့စိတ်ကလွတ်သွားသည်။အိအိငြိမ်းရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းမောလာသည်။ လူကမူးလဲမူးနေတာမို့အားမပါ။သန်းကြိုင်​လဲလီးကိုမဆောင့်သေးပဲအဆုံးထိထည့်ထားရင်းနဲ့အိအိငြိမ်းရိုက်ပုတ်နေတာတွေကိုလက်နဲ့ လိုက်ဆွဲရင်းပါးစပ်ကပြောချင်ရာတွေပြောနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိအိငြိမ်းအားပျော့လာတော့နို့တွေကိုလက်နဲ့ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ရင်း ”အား…ကောင်းလိုက်တာကွာ…နို့တွေကအိတင်းနေတာပဲ…ကောင်မဆေးတွေသုံးပြီးယောက်ကျားကိုဆွဲဆောင်ထားတာမလား….ဟား…ဟား….ဟား…” ”ကိုသန်းကြိုင်​ရယ်….တော်ပါတော့….အိကိုသနားပါ….လွှတ်ပါတော့….အဟင့်…ဟင့်…အိ….အိ” အိအိငြိမ်းမရုန်းနိုင်တော့လေပျော့နဲ့တောင်းပန်သည်။သန်းကြိုင်​ခုချိန်မှတော့မရတော့။လူကလဲမူး​နေပြီမို့စိတ်ရိုင်းကဝင်နေပြီ။ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးလို့သဘောထားကာရှေ့ဆက်တွန်းနေသည်။
နို့တွေကိုကိုင်လိုက်ညှစ်လိုက်နဲ့ပါးစပ်ကလဲညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း ​တွေပြောနေသည်။အိအိငြိမ်းဘဝမှာဒီလိုတစ်တစ်ခွခွပြောတာတခါမှမကြားဖူးသလိုအပြောလဲမခံရဘူး။ ခုလိုတစိမ်းတဦးရဲ့ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ခြင်းခံရတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပင်။သူမယောက်ျားတောင်ခုလိုတခါမှမကိုင်ဖူး။ သန်းကြိုင်​ကတစ်တစ်ခွခွပြောသလိုနေရာအစုံကိုလိုက်ပြီးကိုင်နေတာမို့စိတ်ကအရမ်းကိုဝမ်းနည်းလာပြီးကိုကို့ကိုအရမ်းသတိရမိသည်။ ကိုကို့ကိုသူမသစ္စာဖောက်သလိုဖြစ်သွားပြီလို့တွေးမိပြီးမျက်ရည်ကကျလာပြန်သည်။ ဒါကိုသန်းကြိုင်​ကတွေ့တော့တဟားဟားနဲ့ရယ်ပြီးနို့နှစ်လုံးကိုညှစ်ကိုင်ကာခါးအားနဲ့လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးခပ်ဆတ်​ဆတ် ​ဆောင့်ချလိုက်တော့ ”အာ့…ကျွတ်..ကျွတ်…နာတယ်…ဖယ်ပါတော့…​တော်ပါတော့…အီး…ဟီး…ဟီး…” ”ကောင်းလိုက်တဲ့အဖုတ်…ကြပ်နေတာပဲလိုးရတာ…စောက်ကောင်မအရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ်ကွာ” ပြောပြောဆိုဆိုသန်းကြိုင်​တယောက်ကြမ်းပြီ။အိအိငြိမ်းတယောက်ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ငိုနေပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းအဖုတ်ထဲကလီးကို မသိမသာလက်ခံလာသည်။အရည်တွေကထွက်လာကာလီးကအဝင်အထွက်ချောလာသည်။ သန်းကြိုင်​ရဲ့ဆောင့်အားကအားနဲ့မာန်နဲ့ဆောင့်နေတာမို့တချက်ဆောင့်တိုင်းအင့်ခနဲအင့်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားကာသားအိမ်ဝကပူခနဲပူခနဲဖြစ် သွားသည်။အသိစိတ်နဲ့လူကငြင်းဆန်နေပေမယ့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာသည်။ ပြည့်ဝတဲ့အရသာကတကိုယ်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပျံ့နှံ့လာသည်။
သန်းကြိုင်​ကအိအိငြိမ်းနားနားကိုကပ်ကာတစ်တစ်ခွခွတွေပြောပြီးဆောင့်နေဆဲပင်။ ”အ…ဟင့်ဟင့်…အင့်…အင့်…အင့်…​တော်ပြီ…​တော်ပြီ…ဟင့်…ဟင့်…” နှုတ်ခမ်းကငြင်းနေပေမယ့်သူမယောက်ကျားနဲ့ကွာခြားစွာကာမအရသာကိုပြည့်ဝစွာပေးနေတာကိုစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းပါလာသည်။ သူမငြင်းဆန်ချင်သည်။မဟုတ်ဘူးဒါငါမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုတခြားလူတယောက်ကမုဒိန်းကျင့်နေတာ။ ငါလက်သင့်မခံဘူးတွေးနေပေမယ့်မူးကလဲမူးဆောင့်ချက်တိုင်းကသူမအရင်ကဘာလိုအပ်မှန်းမသိတာကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိတဲ့အရာကဒါပါလားဆိုတာသိသွားပြီးစိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်နေသည်။သန်းကြိုင်​လဲအိအိငြိမ်းရဲ့အပြောင်းအလဲကိုသတိထားမိတာကြောင့်အိအိငြိမ်း နားကိုကပ်ကာစိတ်ကြွစေရန်ထပ်ပြီးတစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်ကာလီးကိုတဆုံးထုတ်တဆုံးထည့်မှန်မှန်ဆောင့်နေသည်။ အဖုတ်ကအရည်တွေနဲ့လီးဝင်တိုင်းတဗြွတ်ဗြွတ်တဗျစ်ဗျစ်နဲ့အသားခြင်းရိုက်တဲ့အသံကလဲအခန်းထဲမှာဆူညံနေသည်။ အိအိငြိမ်းခါး​လေးကိုလက်နဲ့မ’ကာကိုယ်ကရှေ့ကိုငိုက်ထားတာမို့အိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကကြွတက်နေကာလီးတချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အတွင်းထဲကိုနက်နက်ဝင်သွားကာဖိလိုက်တိုင်းမွေ့ရာကအတွင်းဖက်ဝင်သွားပြီးပြန်ကန်လာပြန်တာမို့ဆောင့်ချက်တိုင်းက အိအိငြိမ်းအတွက်ရူးသွပ်မှုဖြစ်စေသည်။မရတော့ပေ။အိအိငြိမ်းဆန္ဒကိုအသိနဲ့ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့မရတော့။ အထိအတွေ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပြီ။ မိန်းမကိစ္စကိုကျွမ်းကျင်ဆရာကျတဲ့သန်းကြိုင်​ရဲ့အောက်မှာကျရှုံးသွားပြီ။ ”အ…ဟ…ဟ…အင့်…အင့်” ”ကောင်းလား…အိ…ကောင်းလား…”မဖြေ။
ဒါကြောင့်သန်းကြိုင်​အိအိငြိမ်းနို့သီးခေါင်းတွေကိုညှစ်လိုက်ရင်း ”ကောင်မ…မေးနေတယ်…ငါလိုးတာကောင်းလားလို့…ခံလို့ကောင်းလားဖြေစမ်း…” ”အား….ကျွတ်…ကျွတ်…​ကောင်းတယ်….အ…ဟင့်…ဟင့်…နာတယ်” သန်းကြိုင်​ပြုံးလိုက်သည်။သူတချက်ချင်းဆောင့်လိုက်ပြီးနို့တွေကိုချိုင်း​အောက်​ကလျှိုကာငုံ့စို့လိုက်သည်။ အိအိငြိမ်းစိတ်ကအရမ်းကိုကြွလာသည်။ ပြီးချင်လာသည်။အရမ်းအရမ်းကိုကောင်းလာကာ ”အ…အင့်…အင့်…​ဆောင့်…​ဆောင့်…မရပ်နဲ့…ခပ်နာနာလေးဆောင့်ပေး….ကောင်းတယ်…အန်းးးးဟန်းးးး….​ကောင်းတယ်….အန်းးးး…အန်းးး…ပြီးပြီ…အစ်အိ…ပြီးပြီ…အ…အ…အားးးး” အိအိငြိမ်းပြီးသွားပြီ။သန်းကြိုင်​ဧ။်​လည်​ကုပ်​ကိုလက်​​နောက်​ပြန်​​လေးအတင်းဖက်ကာဖင်ကိုအတင်းကော့ကာကပ်ထားပြီး တဆတ်​ဆတ်နဲ့ဖြစ်နေသည်။ ခြေတွေကကုပ်ကွေးတက်ကာပါးစပ်ကဘယ်လိုအသံတွေမှန်းမသိ။ သန်းကြိုင်​လိုးလို့မပြီး​သေး​ပေမယ့်​အိအိငြိမ်းတအင့်​အင့်​အသံ​လေးသာထွက်​ရင်းပြန်​အိပ်​​ပျော်​သွားသည်​။ ”အားပါးပါးကျပ်လိုက်တာ…စီးလိုက်တာကွာ….မင်းသစ်​တခါဘဲလိုးထားသေးတယ်ထင်တယ်” အမှန်တကယ်လည်းမင်္ဂလာဦးညတစ်ခါဘဲလုပ်ဖြစ်သေးသည်။မနေ့ကမူးမှောက်သွားလို့မလုပ်ဖြစ်။ဒီနေလည်းမင်းသစ်​မှောက်ပြန်ပြီ​ဖြစ်သည်မို့သန်းကြိုင်​​ကံကောင်းနေလေသည်။သန်းကြိုင်​​ခပ်ပြင်းပြင်းပစ်ဆောင့်နေလေသည်။ဆီးစပ်ခြင်းတစ်ဘမ်းဘမ်းနဲ့ထိနေလေသည်။ခုမှသိတဲ့မိန်းကလေးကိုခိုးလိုးနေရတဲ့အသိနဲ့စီးပိုင်ကျပ်နေသောစောက်ဖုတ်ကြောင့်အချက်နှစ်​ဆယ်လောက်နဲ့တင်သန်းကြိုင်​​ပြီးချင် သွားသည်။သန်းကြိုင်​​အားကုန်ပစ်ဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီးအိအိငြိမ်း​စောက်ခေါင်းထဲလီးတစ်ဆတ်ဆတ်​တုန်ကာသုက်​ရည်များပန်းထည့်လိုက်လေသည်။ ”ဟူး…ငါလိုးမ…လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာကွာ” လီးပြန်ထုတ်ပြီးဘောင်းဘီပြန်ဝတ်လိုက်ကာနောက်ဆုံးသုက်​တရွှဲရွှဲအဖုတ်ထဲမှစီးကျနေသောအိအိငြိမ်း​ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်သည်။တစ်ရှူးဖြင့်အိအိငြိမ်း​ကိုသန့်စင်ပေးပြီးအဝတ်အစား​တွေ​သေချာပြန်​၀တ်​​ပေးသည်​။
​ဘော်​လီချိတ်​​တွေကိုလည်းကျကျနနပြန်​တပ်​ထား ​ပေးလိုက်​သည်​။အ၀တ်​များဝတ်​​ပေးပြီး​နောက်​​တော့ပြန်ထမ်းခေါ်လာကာခုံပေါ်ဟန်မပျက်တင်ပေးထားလိုက်လေသည်။ ”ဟေ့ကောင်မင်းပြီးပြီ​လား…ဒါဆိုလည်းပြန်မယ်ကွာနောက်နေ့ငါ့ကိုလည်းဖန်ပေးဦးကွ” ​နောက်​​နေ့မနက်​အိအိငြိမ်းနိုးလာ​တော့၃နာရီ​လောက်​သာရှိ​သေးသည်​။အိအိငြိမ်းလည်းသူမကြုံ​တွေ့ခဲ့ရ​သောအဖြစ်​အပျက်​ကို အိပ်​မက်​ဟုသာထင်​သွားပြီးရှက်​ပြုံး​လေးတစ်​ချက်​ပြုံးမိလိုက်​​သေးသည်​။ နောက်တစ်နေ့အိအိငြိမ်း​​​နေ့လည်​​ကျောင်းပြန်အလာအိမ်တံခါးကိုသော့ဖွင့်နေတုန်းရှေ့အခန်းမှသန်းကြိုင်​​​အခန်းထဲမှထွက်လာ ​လေသည်။သန်းကြိုင်​​ပြုံးပြကာ ”ဆရာမအိအိငြိမ်း​…မင်္ဂလာပါ” အချိုသာဆုံးအပြုံးလေးဖြင့်အိအိငြိမ်း​ပြုံးပြကာ ”ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…ကျွန်​မညကလေ…ခေါင်းတွေမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ရှင်တို့ပြန်သွားတောင်မသိလိုက်ဘူး” ​သန်းကြိုင်​​ကတော့သူ့ရှေ့ကဖြူဖြူတောင့်တောင့်လှလှမိန်းမချောဆရာမလေးကိုကာမစပ်ယှက်ရန်ရင်ခုန်နေလေသည်။ အိအိငြိမ်းမှာ​ကျောင်းသွားရဦးမည်ဖြစ်၍အဖြူ​ရောင်ရင်ဖုံးအင်္ကျီခါးတိုလေးနှင့်ထဘီအစိမ်း​လေးကိုဝတ်ထားသည်။ ခါးတိုအင်္ကျီမှာပါးလွှာသဖြင့်နောက်မှကြည့်လျှင်အထဲမှချိတ်၅ခုတပ်အသားရောင်ဘော်လီလေးကိုထွင်းဖောက်မြင်နေရသည်။ သေချာကြည့်လျှင်ဘော်လီချိတ်များကိုပင်မြင်နိုင်သည်။လွတ်နေသောခါးသားဝင်းဝင်းလေးမှာလည်းသန်းကြိုင်​ကိုမြူစွယ်နေသည်။
တင်းယင်းလုံးဝန်းသောအိအိငြိမ်းဧ။်တင်သားနှစ်လုံးမှာထဘီထဲမှရုန်းကြွနေသည်။အတွင်းခံအရာလေးကိုထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်။ ”အိအိငြိမ်း​….” ”ရှင်…..​ပြောလေ” ”အိအိငြိမ်း​….ဒီကောင်မလေးကိုသိလားမသိဘူး” သန်းကြိုင်​​အိပ်ကပ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ကာပုံတစ်ခုကိုပြလေသည်။အိအိငြိမ်း​သိလိုသိငြားစူးစမ်းကာကြည့်လိုက်လေသည်။ ပုံထဲမှာအရှက်တရားကင်းမဲ့စွာစောက်ဖုတ်အပြဲသားနှင့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပုံဖြစ်နေသည်။ အိအိငြိမ်း​မျက်ခုံးလေးပင့်သက်သွားကာရင်ဝကိုစို့ရိုက်သလိုစူးခနဲဖြစ်ကာမျက်နာလည်းနီရဲသွားသည်။ လက်ထဲကသော့တောင်လွှတ်ကျသွားသည်။ ”သေချာကြည့်အုန်း…ဒီမှာ…ဒီမှာ” အိအိငြိမ်း​လီးတစ်ချောင်းကိုနမ်းနေတဲ့ပုံတွေ၊စောက်ဖုတ်ထဲလီးဝင်နေပုံတွေ၊​နောက်ဆုံးလရည်ရွှဲသောပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအိအိငြိမ်း ​လဲပြိုလုမတတ်ခေါင်းတွေမူးသွားသည်။ ရှက်လွန်းလို့မျက်နာတစ်ခုလုံးနီမြန်းကာသန်းကြိုင်​​တို့ရှေ့ကနေကိုယ်ပျောက်သွားလိုက်ချင်မိသည်။ ”သိလားအမ…သူ့ကိုလိုင်းပေါ်တင်ပြီးဖွမလို့” ”ဟင်ရှင်တို့ကျွန်​မကိုညကဘာလုပ်ခဲ့ကြတာလည်း….ဒီပုံတွေက….အို..ရှင်တို့ယုတ်မာလိုက်တာ…ဖျက်လိုက်ပါရှင်…တောင်းပန်ပါတယ်.​နော်…​နော်” သန်းကြိုင်​​ဂွင်ရောက်နေပြီ​မို့ ”ဖျက်စေချင်ရင်ကျွန်​တော်တို့စိတ်ကြိုက်အမခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးမလား…ဒါဆိုဘယ်သူမှမသိအောင်ထိန်းသိမ်းထားမယ်” အိအိငြိမ်း​ဖောက်ပြန်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်နေသည်။ကိုမင်းသစ်​ကိုသစ္စာမဖေါက်ချင်ပါ။ဒါပေမယ့်ဒီဘက်ကအိအိငြိမ်း​ရဲ့ပုံတွေလူပုံအလယ်မှာအရှက်မကွဲဖို့လည်းအရေးကြီးနေသည်။
လမ်းနှစ်သွယ်ကိုအိအိငြိမ်း​အခက်တွေ့နေသည်။ ”ကြာပါတယ်အမရယ်…လာ” ယဉ်​စစ​လေးဖြင့်​အိ​နြေ္ဒရရ​လေး​ချော​နေ​သောအိအိငြိမ်း​ကိုသန်းကြိုင်​​အခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားလိုက်​ပြီးတံခါးကိုပိတ်ကာဂျက်​ထိုးလိုက် ​လေ​တော့သည်။ အခန်းထဲ​ရောက်​လို့ဂလန့်​ထိုးတံခါးပိတ်​ပြီးတာနဲ့အိအိငြိမ်းပါးပြင်​နုနု​လေးကိုဖြန်းကနဲပိတ်​ရိုက်​ပစ်​လိုက်​သည်​။ အိအိငြိမ်းခေါင်းထဲမှာကြယ်တွေ၊လတွေမြင်သွားသည်။နာလိုက်တာလဲပြောမနေနဲ့တော့။ မူးဝေပြီးနေရာမှာပဲလဲကျသွားသည်။ကုလားကအိအိငြိမ်းကိုပွေ့ချီလာပြီးကုတင်ပေါ်ဝုန်းကနဲပစ်ချလိုက်သည်။ ”ဘာလုပ်တာလဲ…အဟင့်” ”ပါးစပ်ပိတ်ထား…ပါးထပ်ရိုက်ပစ်လိုက်မယ်” ဒီကုလားသူ့ကိုဗျင်းတော့မယ်ဆိုတာအိအိငြိမ်းသိပေမယ့်သိပ်မရုန်းရဲတော့ပါဘူး။ ”မလုပ်ပါနဲ့…ကျွန်​မမှာလင်ရှိတယ်…မကောင်းပါဘူး” မသိစိတ်ကခပ်ကြမ်းကြမ်းပြုကျင့်ရသည်ကိုအရသာတွေ့တတ်သောသန်းကြိုင်​အဖို့တော့တောင်းပန်သံများကိုသနားရမည့်အစား နားဝင်ပီယံဖြစ်သောသီချင်းသံအဖြစ်သာခံစားနေရလေသည်။ ထို့နောက်သန်းကြိုင်​ကအိအိငြိမ်း၏နုနုရွရွပါးပြင်လေးကိုဖျန်းခနဲဖြတ်ရိုက်လိုက်ပြန်သည်။ ယောက်ျားကြီးတယောက်၏အားအပြည့်တော့သုံးထားခြင်းမဟုတ်။နာကျင်မှုကိုခံစားရုံလောက်သာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ရင်သားအစုံအားဆုပ်နယ်ခြေမွလိုက်သည်။ အတင်းဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လိုက်သောကြောင့်အရသာမရှိဘဲနာကျင်ခြင်းကိုသာခံစားလိုက်ရသည်။ ငြင်းဆိုတောင်းပန်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ထားသောကြောင့်ဘာမျှမပြောဘဲပြုသမျှကိုနုနေရရှာတော့သည်။
ထို့​နောက်​​တော့ကုလားကအိအိငြိမ်းအင်္ကျီကိုဆွဲဖြဲပစ်သည်။ အိအိငြိမ်း​လေးရဲ့ရင်​ဖုံးအင်္ကျီကိုရင်​ဘတ်​က​နေ​ဆောင့်​ဆွဲလိုက်​တာ​ကြောင့်​နှိပ်​သီး​တွေပြုတ်​ထွက်​ကုန်​ပြီးနို့အုံတင်းတင်းနှစ်​အုံက အသား​ရောင်​​ဖျော့​ဖျော့​ဘော်​လီလေးသာခံပြီး​ပေါ်လာသည်​။ ရင်ဘတ်ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားခြင်းနှင့်အတူအိအိငြိမ်း၏လှပပြည့်တင်းသောရင်အစုံမှာလှပစွာပြူးထွက်သွားသည်။ ဖြူဝင်းသောအသားအရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ရင်သားများမှာပိုမိုဖြူဝင်းကာအလွန်လှနေသည်။ အိအိငြိမ်းမျက်နှာလေးမှာနီမြန်းလျက်မျက်ရည်များပြည့်နှက်နေသည်။ ဒီ​နေ့ကအသိစိတ်​ရှိ​နေတဲ့မိန်းမ​ချောအကိတ်​​လေးကိုသားမယားအဖြစ်​ဆက်​ဆံရမှာမို့ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​လည်းတအားထန်​ပြီး အိအိငြိမ်းရဲ့​ဘော်​လီကိုရင်​ဘတ်​မှဆွဲဖြုတ်​ပစ်​လိုက်​ရာ​ဘော်​လီ​နောက်​​ကျောချိတ်​​တွေသာမကလက်​​မောင်းကြိုး​တွေပါပြုတ်​ ထွက်​ကုန်​သည်​။အိအိငြိမ်းရဲ့ထွားမို့တဲ့ရင်​သားလှလှတစ်​စုံကိုသန်းကြိုင်​အငမ်းမရကိုင်​ပြီးစို့သည်​။ ကုလားကဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်းပေါင်ကြားမှာနေရာအသေအချာယူပြီးနို့ကြီး၂လုံးကိုကုန်းစို့တယ်။ အားနဲ့စို့လိုက်လို့အရာတွေပါထင်ကုန်တယ်။အိအိငြိမ်းရဲ့စောက်ပတ်အ၀ကိုလီးထိပ်နဲ့အသေအချာထောက်ထားမို့စောက်ရည်များ စိမ့်ကျလာလေပြီ။ ”လေးဘက်ထောက်ပေးစမ်း” ဟုပြောလိုက်ရာအိအိငြိမ်းလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်ကုတင်ပေါ်တွင်လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်ရသည်။ ကြောက်စိတ်ဖြင့်တုန်တုန်ရီရီလေးဖြစ်နေရှာပုံကတမျိုးကြည့်ကောင်းနေပြန်သည်။အလိုမတူရင်လေးဘက်ထောက်ခိုင်းဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပေမယ့်မြန်မြန်ပြီးသွားမှအေးမှာမို့အိအိငြိမ်းသန်းကြိုင်​ပြောသလိုလုပ်ပေးလိုက်သည်။
ပတ်​၀န်းကျင်​ကသိသွားရင်သူမဘ၀ပျက်သွားနိုင်တယ်လေ။ ”နင့်ဖင်ကြီးကိုကော့နိုင်သမျှကော့ပေးစမ်း..အားပါး…ဆရာမအိုးတဲ့…ရှိးးး…ကောင်းလိုက်တဲ့အိုးကွာ..” ပြောပြောဆိုဆိုပြည့်တင်းစွင့်ကားသောတင်ပဆုံကြီးကိုဖြန်းခနဲရိုက်ချလိုက်သည်။ဖြူဖွေးသောတင်ပါးမှာနီရဲသွားတော့သည်။ ထို့နောက်ပြည့်တင်းသောတင်ပါးကြီးကိုကိုင်ကာနေရာယူလိုက်သည်။ တောင်မတ်နေသောလီးကြီးကအိအိငြိမ်း၏စောက်ဖုတ်ဝလေးကိုတေ့လိုက်မိတော့သည်။ ထို့​နောက်​​တော့အိအိငြိမ်းကိုတုံးလုံးချွတ်​ပြီးခုတင်​​ပေါ်တွင်​​လေးဖက်​​ကုန်းခိုင်းကာ​နောက်​မှ​နေ၍အားရပါးရဆက်​ဆံ​တော့သည်​။ ”ဗြွတ်​….ဗြွတ်​…ဗြွတ်​…ဖွတ်​…ဘွတ်​…” သန်းကြိုင်​၏လီးကြီးမှမာတောင့်နေခြင်း၊ခါးအားသန်လှခြင်းတို့ကြောင့်တချက်ထဲနှင့်အဆုံးဝင်သွားလေ၏။ ”အား..အား..နာလိုက်တာ…အတင်းမလုပ်ပါနဲ့..အဟင့်အဟင့်…..အမလေး…အား…ဟင့်…ဟင့်” ဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်းရဲ့တောင်းပန်တိုးလျှိုးသံကသနားစရာမဖြစ်ဘဲသန်းကြိုင်​ရဲ့စိတ်ကိုပိုဆွပေးသလိုသာဖြစ်နေလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့်နို့ကြီးတွေကိုဆွဲကာဆက်ခါဆက်ခါသာဆောင့်ပေးနေ၏။ ဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်းမှာအရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်ကာဖင်ဘူးတောင်းပင်ထောင်နေလေပြီ။ သူမ၏ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာမွေ့ရာနှင့်ထိနေလေပြီ။မကြာပါချေအိအိငြိမ်းတယောက်လည်းစိတ်ပါလာပြီးကာမရည်ကြည်များမတရား ထွက်လာလေသည်။ထို့ကြောင့်လိုးအားကပိုမိုကောင်းလာပြီးသန်းကြိုင်​မှာပြီးလုပြီးခင်ပင်ဖြစ်လာရတော့သည်။
ဒါပေမယ့်ပြီးလို့ဘယ်ဖြစ်ဦးမလဲ… ဒီမိန်းမမှာလိုးစရာအပေါက်သုံးပေါက်တောင်ရှိတာ။ဒီလိုဖင်ကြီးကြီးဆော်မျိုးမှဖင်မချရင်သန်းကြိုင်​ငမိုက်သားဖြစ်တော့မည်။ ထို့အပြင်သန်းကြိုင်​လိုကုလားတစ်​​ကောင်အဖို့ဒီလိုဖြူဖြူတောင့်တောင့်လေးကိုဖင်လိုးခွင့်ရရန်အခွင့်အရေးမှာနည်းလှသည် မဟုတ်ပါလား။ သန်းကြိုင်​မှာအိအိငြိမ်းပေါင်ကြားထဲခေါင်းတိုးဝင်ပြီးစောက်ပတ်လေးကိုရက်ပေးလိုက်သည်။ထို့နောက်သူ့လျှာကြမ်းကြီးဖြင့်စောက်စိ ​လေးကိုရက်ပေးလိုက်ရာအိအိငြိမ်းထွန့်ထွန့်လူးသွားသည်။ စောက်ပတ်ရဲ့ပွင့်လွှာလေးတွေကိုကိုက်လိုက်၊ဖင်ဝလေးကိုရက်ပေးလိုက်လုပ်နေရာ အိအိငြိမ်းမှာကိုယ့်နို့​တွေကိုယ်ပြန်ဖျစ်ညှစ်နေရတော့သည်။ဘယ်မိန်းမကစောက်ပတ်ကိုအရက်မခံချင်ဘဲရှိပါ့မလဲလေ။ စောက်စေ့ပြူးပြူးလေးကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့စုတ်ပေးနေရင်းစောက်ပတ်ထဲလက်၂ချောင်းပူးပြီးကလိပေးလိုက်တော့ ”အား…အား…ဟင်း…ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲ” အိအိငြိမ်းဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကိုဆွဲဖြဲလိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့ခရေပွင့်ကလေးကိုဝိုင်းပြီးဝလုံးလေးတွေရေးပေးနေတယ်လေ။ ပြီးတော့ဖင်ပေါက်ထဲကိုလက်၂ချောင်းပူးထဲ့ပြီးကလိနေတယ်။လီးကြီးနဲ့ဖင်ဝကိုတေ့လိုက်ပြီးလီးတန်းလန်းနဲ့တေ့ရက်ကြီးမှာဖင်ကို ပွတ်သပ်နေသေးတယ်။ဒစ်ကြီးတခုလုံးကိုထည့်လိုက်တော့ဖင်ဝတခုလုံးပူတက်သွားတာပဲ။ ”မလုပ်ပါနဲ့….ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ…မလုပ်ပါနဲ့…အား…..အား” အိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကိုခါရမ်းလိုက်တော့လီးကမကျွတ်ထွက်သွားပဲပိုပိုပြီးကျွံဝင်လာတယ်။ နာလိုက်တာမှအရမ်းဘဲ။အရည်မှမထွက်တဲ့ဟာကို။လီးကြီးကကြီးလွန်းပြီးမဟားဒရားလုပ်နေတာမို့ဖင်ဝလေးပါကွဲထွက်သွားတယ်။ အိအိငြိမ်းလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူး။ ရုန်းလို့ကလဲမရဘူး။သေလုမျောပါးဘဲ။ကုလားကတော့ဖင်အပျိုလေးကိုပါကင်ဖွင့်လိုးနေရတာမို့အရသာရှိမှာပေါ့လေ။ ”တော်ပါတော့ရှင်…ကျမသေပါတော့မယ်…နာလွန်းလို့ပါ” သန်းကြိုင်​လည်းဘာမှပြန်ပြောမနေဘဲဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးဖင်ခေါင်းထဲမှာပင်သုက်လွှတ်လိုက်၏။
ဖင်ဝနှင့်ဖင်ခေါင်းနံရံတလျှောက်ကွဲပြဲသွားသောနေရာလေးတွေအတွက်ကော်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပင်။ သန်းကြိုင်​မှာပြီးသွားသော်လည်းလီးကြီးမှာသိပ်မကျသေးပေ။ခပ်မာမာပင်ရှိနေသေးတာကြောင့်ဆော်​လေးကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီးစောက်ပတ်ထဲကျင်းစိမ်ကာအမောဖြေနေလိုက်သည်။ ထိုခဏမှာပင်အိအိငြိမ်းလက်​ကိုင်​အိတ်​ထဲကဖုန်းမြည်လာတာကြောင့်… ”ဖုန်းကိုင်လိုက်စမ်း” ဒါသန်းကြိုင်​သက်သက်ရစ်လိုက်ခြင်းပါ။အိအိငြိမ်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်ပင်ဖုန်းကိုင်​လိုက်သည်။ ”ဟလို..” ”အင်း..အိအိငြိမ်းကိုယ်ပါ…ပြန်ရောက်ပြီကားဂိတ်မှာ” ”ကို့ကိုလာကြိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး…အဖေတို့မ​ရောက်​​သေးဘူး” သူ့လင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့မိန်းမကိုလိုးချင်လာတာမို့သန်းကြိုင်​လီးကချက်ချင်းမာတောင့်လာတယ်။ အိအိငြိမ်း​စောက်ခေါင်းထဲကလီးကြီးပြန်မာလာတာကိုသတိထားမိတယ်။ ”ကို…အင့်…ကားငှားပြီးပြန်….အ…ပြန်ခဲ့လိုက်​နော်…အ” အခုဆိုခပ်ပြင်းပြင်းလိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြားမှာအင့်ကနဲအိကနဲအသံမထွက်မိအောင်အိအိငြိမ်းသတိထားနေရတယ်။ ဆီးစပ်နှစ်ခုပူးကပ်သွားတိုင်းတဖတ်ဖတ်အသံတွေကတော့ထွက်နေလေရဲ့။ ”အိ​လေး….နေကောင်းရဲ့လားဟင်” ”မကောင်းဘူး….….ကို…အု..မြန်မြန်…..ပြန်လာနော်..” ”အင်း..အင်း…ကိုယ်မြန်မြန်ပြန်ခဲ့မယ်…ဒါဘဲနော်” ”အင်း…အင်း” အိအိငြိမ်းဖုန်းကိုမြန်မြန်ချလိုက်ရတယ်။ မော်တာတပ်ထားသလိုတရကြမ်းဆောင့်လိုးတာကိုခံရင်းအိအိငြိမ်းတော်တော်ကောင်းလာတယ်။ မုဒိမ်းကောင်ကိုမုန်းပေမဲ့လီးကြီးကိုခိုက်သွားတာကြောင့်စောက်ပတ်ကိုအောက်ကနေပြန်ပင့်ပေးနေမိသည်။ ကုလားကဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီးအိအိငြိမ်းနို့ကြီးတွေကိုဆွဲကာလိုးတော့သည်။အရသာကောင်းလွန်းတာမို့အိအိငြိမ်းတစ်​ချီပြီးသွား ရတော့သည်။ ဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်လိုးနေသည်မသိ။ကုလားကဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲတွန့်ကာအိအိငြိမ်းစောက်ပတ်နံရံတွေကို လရည်ပူနွေးနွေးကြီးနဲ့ဖြန်းလိုက်လေသည်။ ​ချော​မော​တောင့်​​တင်းတဲ့သူများမယားအသစ်​စက်​စက်​​လေးကိုလိုး​နေရတာမို့ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​ကြာကြာမလိုးနိုင်​။ ၅မိနစ်​​လောက်​နဲ့ပဲအိအိငြိမ်းသားအိမ်​ထဲကိုသုက်​​ရေ​တွေတဇတ်​ဇတ်​ပန်းထည့်​​ပေးလိုက်​သည်​။
မိမိစောက်ခေါင်းထဲကုလားမုဒိန်းကောင်၏သုက်ပိုးများဝင်သွားပြီဟူသောအသိနဲ့စစ်ကနဲခံစားလိုက်ရသည်။ ထို့နောက်သူ့လီးကြီးကိုအိအိငြိမ်းစောက်ဖုတ်ထဲမှဆွဲထုတ်ပြီးပါးစပ်နားကိုတေ့ပေးလိုက်သည်။ ”ငါ့လရည်လက်ကျန်တွေစုပ်ပေးစမ်း” အိအိငြိမ်းလည်းငြင်းဆန်လို့မရမှန်းသိပြီးစုပ်ပေးလိုက်ရတော့သည်။လီးထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့လီးတချောင်းကိုပထမဆုံး မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။အသားအရေမည်းရတဲ့အထဲဖင်ကိုရော၊စောက်ဖုတ်ကိုပါလိုးထားလို့ပေပွနေသည်။ ဆီးစပ်ကလမွှေးတွေမှာလိမ်တွန့်နေရသည့်အထဲရှည်ရှည်းလျားလျားကြီးတွေမို့ရွံဖို့ပင်ကောင်းလေရဲ့။ ထို့နောက်တွင်တော့အိအိငြိမ်းခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတော့သည်။ တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေလိုက်တိုင်းအိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကတုန်တုန်ထွက်သွားသည်။ ဖင်သားဖြူဖြူလေးမှာအရှိုးရာတွေရှိ​နေသည်။ဖင်ဝမှာဝါဖြူဖြူအရည်တွေနဲ့သွေးစလေးတွေ။ ထို့​နောက်​​တော့ခဏ​စောင့်​၍လီး​တောင်​လာပြန်​လျှင်​​နောက်​တစ်​ကြိမ်​…….အိအိငြိမ်းရဲ့အဖုတ်​​လေးထဲသို့သုက်​ရည်​​တွေအကြိမ်​ကြိမ်​ထည့်​​​ပေးလိုက်​​တော့သည်​။ အိအိငြိမ်းခမျာ​တော့သန်းကြိုင်​ရဲ့ကာမဆန္ဒရှိတိုင်းစားသုံးခံရမည့်​၊သန်းကြိုင်​ဧ။်​ရင်​​သွေးများကို​မွေး​ပေးရမည့်​၊ သန်းကြိုင်​ဧ။်​လူမသိသူ’မသိတိတ်​တိတ်​ပုန်းဇနီးချော​လေးဖြစ်​​တော့သည်​။ ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​က​တော့​ချော​မောလှပတဲ့အိအိငြိမ်း​လေးကိုသူ့က​လေး​တွေတစ်​​ယောက်​ပြီးတစ်​​ယောက်​​မွေး​အောင်​အားကြိုး မာန်​တက်​လုပ်​​တော့တာ​ပေါ့။တချို့​နေ့​တွေဆိုရင်​ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​တစ်​​ယောက်​အိအိငြိမ်း​လေးကိုမင်္ဂလာ​ဆောင်​တုန်းကသတို့သမီးဝတ်​စုံ​လေးပြန်​၀တ်​ခိုင်းပြီးတစ်​​နေ့လုံးလိုး​ပေးသည်​။ ထို​နေ့မှစ၍​မိန်းမ​ချော​လေးအိအိငြိမ်းမှာကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​ဧ။်​သားမယားပြုကျင့်​ခြင်းကို​နေ့စဉ်​ခံစားရပါ​တော့သည်………ပြီးပါပြီ​။